अमेरिकामा गएर नीलो फिल्म खेल्ने दुई नेपाली ‘पो*र्न स्टार’ को चर्चा किन भयो ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > अमेरिकामा गएर नीलो फिल्म खेल्ने दुई नेपाली ‘पो*र्न स्टार’ को चर्चा किन भयो ?
काठमाडौं । अमेरिकामा गएर नीलो फिल्म खेल्ने दुई नेपाली चर्चामै छन् । ती हुन् दिप शिखा र विन्दु परियार ।दिप शिखा,उनको वास्तविक नाम भएपनि उनलाई माया बेजिन भनेर चिनिन्छ । उनी भक्तपुरकी हुन् । उनी केही वर्ष पहिले नीलो फिल्म खेल्न कै लागि अमेरिकी पुगेकी थिइन् ।उनले केही स्तरीय ट्रिपल एक्स चलचित्रमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् । अमेरिकामा पो^र्न स्टार अर्थात् नीलो चलचित्रका चर्चित अनुहार बन्न चाहने निकै हुन्छन् । युवापुस्ताको एउटा जमात पो*र्न स्टारकै रूपमा भए पनि नाम र दाम कमाउन लालायित भेटिन्छ ।
ओस्कार’ एवार्ड जस्तै हरेक वर्षको जनवरीमा नीलो फिल्म र पो*र्न स्टारहरूको एभिएन एवार्डको भव्य आयोजना हुने गरेको छ । उक्त एवार्डमा आफूलाई खुलेआम नीलो फिल्मको स्टार भनेर चिनाउनेहरू निकै हुन्छन् र ती हलिउड वा बलिउडका नायकरनायिकाकै हाराहारीमा चर्चामा पनि आउँछन् । माया अर्थात् दीपशिखा त्यही दौडमा सामेल छिन् । कुनै स्वच्छन्द युवती यो दौडमा सामेल हुनु नौलो कुरा होइन, अचम्मको कुरा के हो भने उनले आफ्नो परिचय नेपाली भनेर दिएकी छिन् र उनको प्रोफाइल साइटमा पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरिएको छ
को हुन् माया ? : मायाको त्यही एकमात्र अन्तर्वार्ताका आधारमा उनको नेपाल वा नेपालीसँग कुनै न कुनै रूपबाट संलग्नता छ भन्ने ठहर हुन्छ । उनको भाषा सुन्दा उनी लामो समय अमेरिका बसे पनि उनको मातृभाषा नेपाली नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।उनले अमेरिकाको नीलो फिल्म उद्योगमा आफूलाई नेपाली भनेर परिचित गराएपछि अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूबीच उनको खोजी सुरु भयो । मायाका तथ्यहरू जति सार्वजनिक हुँदै गए, त्यसले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको नेपाली समाजमा हलचल मच्चायो ।
को हुन् बिन्दु? : पोखराबाट पढाईको प्रलोभनमा अमेरिका पुगेकी विन्दु त्यहाँ पुगेपछि पो*र्नस्टार बनिन् । उनको भनाई अनुसार उनी रहरले नभई बाध्यताले पो*र्नस्टार बनेकी हुन् । अदालतले विन्दुका श्रीमानलाई पो*र्नस्टार बन्नुको मुख्य दोषी ठहर्याएको छ । ड्यालसबाट प्रकासित “द ड्यालस मर्निगं न्यूज” समाचार अनुसार स्टेट डिष्ट्रिक्ट जज मार्टिन जे होफम्यानले विन्दुका पूर्वपति टम र्‍यान्डेल सेवेललाई विन्दुलाई फिल्म खेल्न वाध्य वनाएको, यस सम्वन्धि भिडियो र तस्विर वनाई इन्टनेटमा राखेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दैै उक्त रकम हर्जनाका रुपमा विन्दुलाई झण्डै ७५ करोड नेपाली रुपैंया ९७२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर तिर्न फैसला गरेको छ
अमेरिकाको टेक्सास स्थित ड्यालस काउन्टी अदालतको फैसलाका समयमा सेवेल अदालतमा उपस्थित थिएनन् । दुई जना सन् २०१२ मा अलग भएका थिए । विन्दुले गत बर्ष ५८ बर्षीय सेवेलविरुद्ध आफ्ना नां*गो भिडियो तथा दृष्यहरु अनलाइनमा राखेकामा आपत्ति जनाउँदै अदालत गएकी थिइन् ।आफूलाई जवजस्ती यस्तो कार्य गर्न वाध्य पारेको उनको दावी थियो । पोखराकी विन्दु नर्स पढ्न अमेरिका आएकी थिइन् । सेवेलले उनलाई विद्यार्थीका रुपमा अमेरिका आउन मद्दत गरेका थिए । द ड्यालस मर्निगं न्यूजले विन्दुसंग नेपालमा उनको परिवारले पाएको कष्ट लगायत विविध पक्षवारे कुरा गरेर लामो फिचर समाचार प्रकाशित गरेको छ । यसमा उनले आफ्नो विवाहदेखिका कष्टहरु वताएकी छन् ।
पो*र्न स्टारको परिचयसहित अन्तवार्ता सहमतिविना छाप्न पाइँदैन तर, पत्रिकालाई उनले आफ्नो कष्ट सार्वजनिक गर्न सहमति दिएकी छन् । विन्दु परियारका पूर्वपतिले जव उनी अमेरिका आइन् त्यसपछि नेपाली पहिरन छाडेर मिनी स्कर्ट लगाई व्यापारमा जान वाध्य वनाए उक्त समाचारमा उल्लेख छ । विन्दुका तर्फवाट अदालतमा पेश गरेको कागजातमा पनि उनका पूर्वपतिले कृतिम रुपमा स्त*न ठुलो वनाइन लगाउने र पासपोर्ट लुकाईदिई नां*गै क्लवमा काम गर्न लगाएको र जव त्यहाँवाट पनि पर्याप्त पैसा आएन अन्य व्यक्तिहरुसंग शारि*रिक सम्पर्क गर्न वाध्य पारेर यसको फिल्म खिचेको उल्लेख छ ।
विन्दुले उक्त पत्रिकालाई भनेकी छन्–जव मैले उसलाई छांडे त्यसवेला उसले मलाई जवरजस्ती पो*र्न स्टार वनाइसकेको थियो । उनी आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै भन्छिन–कयौं अन्जान व्यक्ति रेष्टुरेण्टमा आएर भन्छन्, मैले तिम्रो भिडियो हेरेको छु तिमी कति पैसा लिन्छौँ । तर, २७ बर्षीया विन्दु भने आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न अमेरिकामा नर्सिङ पढ्न आएको महिलाका रुपमा चिनाउन चाहन्छिन् ।
विन्दुका इन्टनेटमा दुई हजार पृष्ठ भन्दा वढी नग्न र अर्ध*नग्न दृष्यहरु छन् । तर, कुनै पनि उनको सहमतिमा राखिएका होइनन् । अझ पनि राख्ने क्रम नरोकिएको उनको गुनासो छ । जव विन्दु एक बर्षकी थिइन् त्यसवेला सेवेलले उनको नातेदारसंग विवाह गरेका थिए । त्यसपछि सेवेलले विन्दुलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनका लागि उनका गरिब परिवारलाई पैसा दिने प्रस्ताव राखे । उनका परिवारले बोर्डिङ स्कुलको फिस तिर्न सक्दैनथ्ये त्यसले छोरीको भविष्यका लागि प्रस्ताव नमान्ने भन्ने थिएन ।
विन्दुले स्कुलमा अंगे्रजी सिकिन र नर्स पढ्ने सपना वनाइन् । सेवेलले ति नातेदारलाई डिभोर्स गरी फेरि परिवारकै अर्की सदस्यसँग विवाह गरे। यो विवाह पनि सन् २००८ मा समाप्त भएपछि सेवेलले विन्दुसंग सम्पर्क वढाए । उस वेला उनले विन्दुलाई यदि अमेरिका आउने हो भने कलेजमा भर्ना गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । तर, जव विन्दु अमेरिकाको मन्टोनास्थित सेवेलको घरमा आइन् उनले उसलाई पहिले भन्दा फरक पाइन् ।
अमेरिकामा आएपछि सेवेलले उनलाई कहिले लामो कपडा लगाउन दिएनन् वाहिर जान समेत रोके कलेज भर्ना हुन आवश्यक जीइडी परिक्षा दिन समेत जान दिएनन विन्दु भन्छिन् । त्यसपछि उनले नै स्थानिय नां*गै नाच्नु पर्ने क्वलमा काम गर्न भने । विन्दुले यसरी सेवेलले वाध्य पारेर आफुलाई यस्तो व्यवसायमा ल्याएको वताएकी छन् । सेवेलले यति मात्र गरेनन् उनको पासपोर्ट र इमिग्रेसन सम्वन्धि कागजात पनि लुकाइदिएको र कुनैपनि वेला समाउन सक्ने धम्कीसमेत दिएको विन्दु वताउँंछिन् ।एजेन्सीको सहयोग
कोरोनाका कारण धमाधम होटल बुकिङ रद्द